Animation na-aghọ esiwanye ewu ewu dị ka a na-ajụ, n'ọtụtụ ebe na maka ma ntụrụndụ na nkwado video ọ na-adọrọ adọrọ ma na-ekere òkè ndị niile afọ. Dị ka ndị dị otú ahụ, mkpa maka na-aga aga si na Mgbe mmetụta na-eto eto, ya mere ebe anyị ga-ele anya na otú isi akụkụ nwere ike na-enweta.
1. The Agwa
Ikekwe ihe karịrị ihe ọ bụla ọzọ akụkụ nke Mgbe mmetụta ike, ihe ịga nke ọma ndụ a agwa bụ ukwuu dabere na mbụ faịlụ n'ihi na agwa na ị na-arụ ọrụ na. N'ihi na-aga aga n'ime Mgbe mmetụta, gị mkpa a kpọmkwem ụdị agwa faịlụ, ebe ọ bụla ibe nke agwa ị chọrọ izubandu bụ a iche iche oyi akwa. Ndị a na-anọkarịrị kere Illustrator, Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-adịghị Illustrator ma ọ bụ enweghị ike ise gị onwe agwa e nwere free ndị dị na web iji n'ihi na ị na-eme nke a Usoro. Ị dị nnọọ mkpa a agwa na nwere onye ọ bụla dị iche akụkụ iche n'ime onye n'ígwé.
2. Importing faịlụ
Importing uma faịlụ bụ otu ihe ahụ dị ka ọ bụla ọzọ, ị pụrụ nanị ịdọrọ faịlụ jidesie ngo panel na-amalite faịlụ ibubata kwuo. Ọ dị mkpa ka họrọ nri format ebe a iji hụ na ndị dị iche iche n'ígwé na-edebe otú i nwere ike izubandu ya.
Na mbubata mkparịta ụka 'footage' na-abụkarị ndabere ibubata ụdị, na nke a ga-gbanwere ka mejupụtara - ejigide oyi akwa size, dị ka a na-emekwa n'ígwé na n'otu oge na-eme onye ọ bụla oyi akwa bounding igbe ka nke mmewere onwe ya.
Na e nwere na ị nwere gị agwa na ya Associated n'ígwé na gị na oru ngo panel.
Abụọ-ịpị ugbu a dị mejupụtara maka gị agwa tụkọtakwara ngo n'ihi unu, ugbu a anyị nwere na-eme ka n'aka na ọ bụ niile ziri ezi size maka gị chọrọ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na agwa a obere ibu ma ọ bụ nta, ị ga-atụ anya dị nnọọ họrọ niile n'ígwé na ịgbanwe hà ha niile n'out oge, Otú ọ dị na jikọrọ n'ígwé dị ka nke a, na o nwere mmetụta nke Anam Udeme n'ígwé iche ka ha na ịda mbà ma ọ bụ overlapping dị ka ha na-eto, otú ị chọrọ ike ọhụrụ Null Object si n'ígwé> New> Null Object, na mgbe ahụ nne na nna ndị ọzọ niile n'ígwé na ya. Ị na-eme nke a site na-ahọpụta niile n'ígwé na-adọkpụpụta na ịzụ ụmụ button ka null ihe.
Nke a bụ ụzọ kasị irè isi egbuke gburugburu ọ bụla multilayered ihe na bụ bara uru n'ofè na-aga aga oru ngo a na-atụle ebe a.
Ozugbo ị ịgbanwe gị agwa na-enweta ihe niile dị ka ị chọrọ ya, anyị nwere ike ibugharịa na ndị bụ isi nke ndụ gị agwa.
Mgbe ukpụhọde mkpebi na agwa dabara m nwere ndị na-esonụ dị ka ọrụ m na ihuenyo.
Ka ihe dị mfe, m na-aga ka amachibidoro m na-aga aga ka a di na nwunye nke aka na ụkwụ, anyị ga-eji a Nchikota Mgbe Mmetụta si popet Ngwá Ọrụ na Ịzụ ụmụ iji nweta a, otú ahụ ka ọrụ mbụ bụ popet ngwá ọrụ n'onwe ya.
Ị na-ahụ nke a n'elu menu mmanya, na ngwá ọrụ a na e mere ka a pin na a oyi akwa ebe ị chọrọ ya soro na ije.
Olee otú ị na-eji na ọ bụ iji họrọ oyi akwa na ị chọrọ, họrọ popet ngwá ọrụ, na-etinye a pin na ebe ndị ị na ndị na-isi ihe ị chọrọ soro, ọ bụ isi ihe ndị a Mgbe mmetụta na-eji akọwa ije n'etiti keyframes.
Lee, m na-ịtụkwasị atụdo na-emeri na ebe gburugburu agwa, ị nanị pịa na ebe ị chọrọ ka a pin na popet ngwá ọrụ n'ọrụ.
Ozugbo a mere ị nwere ike ahụ amalite izubandu iberibe.
Nke a mere site na-ahọpụta oyi akwa ma ọ bụ n'ígwé na ị chọrọ ịkwaga, na-aga site usoro iheomume panel na-esi na mmetụta, na n'ikpeazụ eke ije na idaha dị ka ikpeazụ ogbo.
5. ndụ na ụkwụ
Iji nweta na-aga aga na-arụ ọrụ anyị, dị ka ọtụtụ mgbe mmetụta oru ngo, jiri keyframe echiche. Ebe a anyị na-aga usoro iheomume panel na họrọ kpọmkwem oyi akwa anyị na-arụ ọrụ na, ebe ọ bụ n'aka ekpe ụkwụ. Anyị mụbaa àgwà maka oyi akwa, na-aga site popet> ntupu> Deform na-esi na atụdo anyị enịm mbụ. Mgbanwe họrọ niile atụdo na oyi akwa, na nke a, e nwere ndị 3, na ịtọ mbụ keyframe. Mgbe ahụ-akpali usoro iheomume tinyere ole na ole okpokolo agba, kpatụ ụkwụ, setịpụrụ ọzọ keyframe. -Amasị m ịhụ maka 5 keyframes na a zuru ezu usoro nke ije, na m nwere ike mgbe ahụ ịnagide na pastes ndị keyframes ikwugharị usoro ma ọ dị mkpa, n'ihi na ihe dị ka na-eje ije, ọ gbapụrụ ọsọ elu dum usoro.
Ndị a na mgbanwe na-ugboro ugboro ise ọ bụla okpokolo agba ruo mgbe anyị nwere mbụ ụkwụ animated N'ihi na a zuru ije. M mgbe ahụ nanị idetuo na pasted ndị keyframes 3 ugboro ala usoro iheomume ike a anọ nzọụkwụ usoro.
The nzọụkwụ ọzọ bụ ikwugharị a na ndị ọzọ na ụkwụ. Na onye a na ị nwere ndu n'ihi na dị ka ị na-enwe ọganihu oge cursor gị aga na-aga aga ga-egosi, otú i nwere ike dakọtara na abụọ ije a.
Ebe a anyị nwere ije simulate a obere agba egwú, ị nwere ike N'ezie, ugbu a ịkwaga na ma tinye isi, ahụ na ogwe aka mmegharị na-aga na ya, ma n'ihi mfe n'ebe a anyị ga nnọọ ime ụkwụ.
6. agbakwụnye ije
Ozugbo anyị nwere anyị usoro na-aga aga anyị chọrọ, nzọụkwụ ọzọ bụ ịgbakwunye ụfọdụ n'ezie ije na idaha. Ụzọ kasị mma ime nke a bụ-eji ikpegara dum usoro ị dị nnọọ kere.
Họrọ niile n'ígwé ma họrọ Nga mkpokọta si n'ígwé> Nga mkpokọta, nke a na-emepụta gị na-aga aga usoro ke otu mejupụtara na anyị nwere ike mgbe ahụ ịgbanwe enweghị effecting anyị animated iberibe.
Dị ka mgbe, ije na-amalite na-eke a keyframe na usoro iheomume mmalite maka ọnọdụ nke tupu mkpokọta.
Ọ bụrụ na ị nọ na-eme a na-eje ije na-aga aga gị mmalite ọnọdụ nwere ike ịbụ anya ihuenyo ka simulate ije jidesie ihuenyo na anya n'akụkụ nke ọzọ, na nke a obere atụ anyị na-aga simulate na elu na ala ije nke a na-agba egwú.
Mgbe ahụ, ọ bụ nanị na a okwu nke ọzọ keyframes na resetting ọnọdụ oge ọ bụla.
A bụ doro anya a nnọọ isi na-aga aga na obere ụkwụ tapping okoko na njedebe, ma ndị isi nke ndụ gị odide-anọgide n'otu ọ bụla na ọ bụ gị na-eme. Ihe bụ isi bụ na-methodical na ije ọnọdụ, ozugbo ị nwere otu N'ịdị gbanwee, i nwere ike iji na dị ka ihe nduzi ka ndị fọdụrụ na-arụ ọrụ site onye ọ bụla ruo mgbe usoro bụ zuru ezu n'ihi na niile components nke agwa. Na-echeta i nwere ike na-aga azụ ọ bụla keyframe na ihe ọ bụla akụrụngwa nke agwa na-eme ka alterations ruo mgbe obi dị unu ụtọ na-arụpụta. Ọ bụrụ na ị bụ ihe ọhụrụ nye na-aga aga nwere ike ịbụ a bit nke a ekpe ikpe njehie usoro, ma nnọgidesi ike dị ihe niile dị mkpa. Ọ bụkwa n'ezie dị oké mkpa iji mee ihe nke ọma na idetuo na mado owuwu mụta nwa gị na-eje ije, ịgba egwú ma ọ bụ ihe ọ bụla mmegharị ịzọpụta a sara ego nke oge na usoro.
Top 10 Free Music Video eso
Olee otú Play Netflix on Apple TV (Apple TV gen 1 gụnyere)
> Resource> Video> Olee otú Mee Agwa Animation na Mgbe mmetụta